ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မျက်ကွယ်မပြု
အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မျက်ကွယ်မပြု
Sunn Htut said...
ဒါဆို သန်းရွှေကြီးက မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီးပေါ့။ တို့နိုင်ငံလည်း လူ့မိစ္ဆာတွေကို ဘုရားအဖြစ်ရှိခိုးနေရပါလားနော်...
Wmieseneed to spoil military shadow,but it's very difical cause armies is on still above the the rule.
we need to spoil military shadow,but it is very diffical cause arimies still above the rule.
I know You rely on a(Ganbiya) monk and I knowing about You and your monk.What he gave you already and how he suggested you.Don't you scar your other site life cause you are getting old and nearly die.
ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဆယ်သက်စားလို့ မကုန်အောင် ခိုးပြီး
ယုတ်မာလို့ အားရ မှ သူတော်ကောင်း ထလုပ်ချင် တဲ့ သန်းရွှေ
အခုမှ နာမည် ကောင်းလိုချင် သေးသလား
ဗိုလ်သန်းရွှေ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မျက်ကွယ်မပြု
ခွေးဘီးလူးမျက်နှာနဲ့ ဒီ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဟာနောက်ကွယ်ကကြိုိးကိုင်နေတာအသိသာကြီးပါ။ ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာရုပ်သေးရုပ် တစ်ရုပ်ပါ။
ဌေးဦးကလူသတ်ကောင်ရဲ့အစေခံ
ဦးသန်းရွေ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ကမ္ဘာမှာ ပညာရေးစနစ် ကျန်းမာရေးစနစ် လူနေမှုအဆင့်အတန်း အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြီး လဘ်စားမှု့ အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်အာင်ပို့ဆောင် ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီပဲ စိတ်ချမ်းသာနေပြီပေါ့ တာဝန်ကျေပြီပေါ့ ဌေးဦး ရာ မင်းကို သနားတယ်ကွာ၊၊
ဖွဲ့ စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အဓိကထား လုပ်ဖို့ လိုပြီ.
ခွေးဘီလူးကို ကာကွယ်ပြောသွားပေးတဲ့ ဌေးဦးရဲ့ ရုပ်ကို ကြည့်ပါအုံး ဘယ်လောက် ယုတ်မာကောက်ကျစ်ပြီး လိမ်လည်လဲ့ ဖြားတတ်တဲ့ ခွေးသူတောင်းစားရုပ်မျိုးလဲဆိုတာ ရွန်စရာကောင်းလိုက်လေခြင်း...
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၀၁- ၁၈-၂၀၁၃)
မမေးစဖူး ဌေးဦး ကို မေးလိုက်မယ် "မင်း အီးပေါက်လို့ မဝ သေးဘူးလား" ရှက်စရာ ဆိုတာ ဘာများမသိလို့ လား
ဟီ..ဟီ...လေလည်လို့ ကောင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ အခုမှ ပိုလို့စားကောင်းယုံရှိသေးတာ အီးပေါက်လို့ မဝေသေးဘူးလားလို့ မမေးသေးပါနဲ့ ငါ့တူရယ်။
ဦးဌေးဦးရေ ခင်ဗျား လည်း နော် တော်တော် သောက်ရှက်မရှိတဲ့ လူပဲ ခင်ဗျား ဖြေဆိုနေတာ ခင်ဗျား မိသားစု အရေးမဟုတ်ဘူး တိုင်းပြည်အရေးအရာတွေ မေးနေတာ ပေါက်ပန်းလေးဆယ် မြင်းချီးပေါက်သလိုတွေ ပြောမနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ တစ်ဖွဲ့ လုံးသတ္တိ အမှန်ရှိရင် တတိုင်းပြည်လုံးရွေးကောက်ပွဲ အခု ပြန်လုပ် မနက်ဖန် အစိုးသစ်မှာ ခင်ဗျားမျက်နှာ မမြင်စေရဘူး အသက်ကြေး ထပ်လောင်းမယ်
ဌေးဦး ယောက်ခမ မဆလ CEC ကြီး ပြုတ်ပြီး
ထောင်ထဲအထိ ၀င်ခဲ့ရတာတောင် အသိတရား
အဘဦးသန်းရွှေရွှေးချယ်ထားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တကယ်ပြည့်ဝတဲ့သူတွေ
ပုတ်သင်ညို ခေါင်းညိမ့်လို့ ဆွဲပြားလေးဆွဲပေးလိုက်ရော ခေါင်းမညိမ့်တော့
တဲ့ ဥပမာလို့ ဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က ပြောတော့လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာများတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုပြီး
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပြခန်းတွေပဲ ကြည့် လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဘယ်လိုကြိုး
ပမ်းခဲ့ ရတဲ့ ပြခန်းမှတ်တမ်း ဘယ်ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းကပြသလဲ?
လောလောဆယ် နဝတ နယက ဇါတ်ထဲမှာ ဘောင်းဘီဝတ်နဲ့ ကခဲ့တဲ့
ဝန်ကြီး ဝန်ကြီးချူပ်တွေ စဉ်းစားမိရဲ့ လား?
ပေါ်ပင်အလုပ်တွေ လုပ်ပြ ပုံသေနည်းအတိုင်း TV မှာတပြေးညီညာပြနေရင်
၂၀၁၀ မဲတွေ ရွေးစဉ်က နယ်စပ်စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ အသုံးချပြီးတော့
ကိုယ်လဲ ကုလားထိုင်တွေရ ရော ပစ်ထား။
နယ်တွေ မှာ တိုင်းစည်ပင်ညွန်မှုးတွေက ဝန်ကြီးချုပ်ကိုအသေအလဲဖားနေ
ကျေးလက်ဦးစီးကလဲ နယ်ပြောင်းဖို့ တင်ထားတာတွေကို မကန်တော့လို
Better go and die ! Stupid Idiot You ! All of you are Useless - Shit for Country !
တိုင်းပြည်တွက် ခေါင်းဆောင်အစစ် ငါဖြစ်ချင်တယ်
idea blog said...
သူကတော့ ရှက်တတ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရရင် သူလုပ်ခဲ့တာတွေတွေးကြည့်ရုံနဲ့တင်ရှက်တတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်၊ ရေးတဲ့သူလဲမရှက်တတ်ဘူးပဲ။
ဝန်ထမ်းလောကမှာလဲ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက မတရားချမ်းသာတော့ပြည်သူ
ဈေးမီးလောင်ပြီး မိန်းမ နှစ်ယောက်ယူတဲ့ သူ ကိုယ့် ဝန်ထမ်းကိုယ်ပြန်ယူ
တဲ့ သူတွေက အစဉ်အလာမရှိတဲ့ သူတွေကတိုင်းညွှန်မှုးတွေဖြစ်
နို့ နံတောင်မပျောက်ပဲ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်မှင်တောင်မခြောက်သေးတဲ့
နိုင်ငံခြားသင်တန်း အခေါက်ခေါက်သွားပြီး ဘာမှမသိတဲ့ PSO တစုကို
တော့ ခြံနဲ့ အနီးဆုံး မြို့နယ်တွေ မှာ ထားပြီး ရွှေပုဇွန်ကို သရက်သီးရောင်း
အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုအလွှဲအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးလား?
htay oo u r shameless i am ashamed of ur generation. The life is very short.
ဌေးဦးက သန်းရွှေဆီမှာ တစ်လ တစ်ကြိမ် ဖင်သွားခံ
U Htay Oo, we do not believe whatever you say.
The betrayers team behaves always betraying and cheating.
Now their father China also still betraying and cheating on our country.
Who will stop it? Who will authorize for this?
Be consider. All go tho hell!
ပါးစပ်အငှားဘ၀ရောက်ရှိနေရတဲ့ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး (သို့ ) သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲထွဋ် (ကျော်ဆန်းထက် အလိမအညာ သာနိုင်မယ်ထင်လို့နေရာပေးခံရသူ) သိစေဖို့ က ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဖေါ်ပြနိုင်တိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်နိုင်တိုင်း၊ အရပ်သားတွေ ထိခိုက်စေတိုင်း အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုက လုပ်တာမဟုတ်ဖူးလို့ပြောရဲပါသလား။
အောက်ကနေကြောက်ပြီလား မေးတယ် ။ ဘာပြောပြော ငါ့ကြီးတော် အပေါ်က ပြောတယ် ။ တကယ်ဆို ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောပါ့လား။ အာဏာလက်ရှိတုန်းကတောင် သတ္တိမရှိတာ ။ ခုဟာက အိနြေ္ဒရရ တရားဝင် နားသွား လွှဲသွားတာ မဟုတ်ပဲ ဆင်းပြေးသွားတာ။ ဘာမှ ရှင်းပြမနေပါနဲ့ ။ နလပြိန်းတုန်းကစ သိကြတယ် ။
ငရွှေ ဆိုတဲ့အကောင် ဂဒါဖီလိုခွေးသေ ဝက်သေ သေပြီး
2015 u have no chance for Election .please tell ur father Than Shwe.
U Htay Oo isateam member of killer betrayer Than Shwe.
U Htay Oo,
Let us ask you something that.........everybody/country knew about Than Shwe bad history. If yr. mother, sisters, yr. wife, children or relatives are destroyed by Than Shwe hiting, how you will say he isagood founder for Myanmar Country?
If yrself you lost yr. hands or eyes or feet or body or life destroyed by Than Shwe hiting, how you will say he isagood builder for Myanmar Country?
If yr. children could not study well,or might be gumblers, or struggling very hard to survive for life, how you will say Than Shwe isagood leader for Myanmar Country?
2008 Constitution is purposely Than Shwe and team did for only one lady & for their corruption to betray country, not for country good benefit.
All bullshit what you said that mentioned in the article.
You should shamealot.
One of all, I can say that all ex-leaders, ex- ministers, current governments, ministers (changed fm military or else) , once they visit to overseas, they spendalot of money for wife, children, theirself, etc........ but behind other country people saying that Myanmar governors can spendalot cos they corruptedalot that's why.
They do not hear, no need to shine.
But our own country people working in there, they shamealot instead of them.
They never interest about the other country policy and how to build, how to maintain, how to take care of people, etc....never study. They do all rubbish for our country. They only do for their pockets.
Do not cheat again the country. If still keeping this practic, pls. remove fm yr. place.
We would like to replaceagood leader DASSK as soon as possible.